Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jordan Henderson Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "na-acha ọcha Yaya Touré".
Anyị Jordan Henderson Hmụaka Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Lions atọ na Liverpool Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Jordan Henderson Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Jordan Henderson Storymụaka Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Jordan Brian Henderson mụrụ na 7th ụbọchị nke June 1990 na Tyne na Wear, Sunderland, United Kingdom na nne ya, Liz Henderson (onye nkuzi ahụike) na nna, Brian Henderson (onye uwe ojii lara ezumike nká).
A gụrụ Jordan na Farringdon Community Sports College. Ọ kwụsịrị ịbanye na Sunderland dị ka nwata (afọ 6). Ma Jordan na nne na nna ya bụ ndị siri ike Sunderland.
Mgbe ọ dị afọ 7, obere Jọdan malitere ịrụ ọrụ dịka onye na-eti ihe na onye aka nri. O mechara gbanwee ka ọ bụrụ onye na-etiti obodo, ọrụ ọ gara n'ihu rue mgbe o toro.
Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke Black Cats U18 n'akụkụ nke na-enweta akara azụ na-azụ azụ.
Na Jenụwarị 2009, Henderson sonyeere Coventry City nke Championship na mbinye ego otu ọnwa. Mgbe o nwesịrị mmerụ ahụ, mgbaji ọkpụkpụ na ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ nke ise n'ụkwụ ya, ọ laghachiri Sunderland na Eprel 2009.
Na 9 June 2011, e zigara Henderson Liverpool maka ego a na-akọwaghị, echere na ọ ga-adị n'etiti £ 16 na million 20 nde.
Ọ ghọrọ onyeisi Liverpool na 2015 mgbe ọpụpụ nke Steven Gerrard. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu ugbu a bụ akụkọ ihe mere eme.
Jordan Henderson Ndụ Ezinụlọ:
Jordan sitere na ezinụlọ Sunderland dị n'etiti ezinụlọ. Nna ya, Brian bụ onye uwe ojii lara ezumike nká bụ onye na-egwuri egwu maka otu ndị uwe ojii Durham.
Brian Henderson ekpughela otu o si zoo ezoro ezo n'ọrịa kansa ya - iji zere imetụta arụmọrụ nwa ya nwoke.
Achọpụtara na ya bu ọrịa ahụ na Nọvemba 2013 ka ndị Medics chọpụtara akpụ n’olu ya. Achọpụtara ihe a mgbe ọ na-ewepụ cyst.
Nnwale ndị ọzọ gosipụtara na ọ nwere carcinoma nke akpịrị ya na akpụ na ire ya.
Brian Henderson na-egbu oge ịkọọrọ nwa Jordan akụkọ ahụ n'oge oge dị mkpa mgbe ndị Reds malitere ịma aka aha na-atụghị anya ya. Ọ gwara nwa ya nwoke tupu ya amalite ịwa ahụ na akpịrị na ire ya na mmalite ọnwa 2014.
Mgbe o kwusịrị akụkọ ọjọọ ahụ, Brain rịọrọ Jọdan ka ọ ghara ichegbu onwe ya, kama, ọ kwesịrị itinye uche na itinye ọtụtụ arụmọrụ nke Man of the Match dị ka o nwere ike.
Brian, bụ onye mesịrị gwọọ ọrịa ahụ, kwuru, sị: “Ọ bụ oge mmetụta uche mgbe m na-akọrọ ezinụlọ ahụ ozi.”
Nne: Mama Jordan Henderson, Liz bụ onye nkuzi nkuzi ahụike ọkachamara.
Nwanyị Jordan Henderson- Liz Henderson.
Na mgbakwunye na inye nlekọta nne, Liz Henderson bụ maka ahụike na ọgụgụ isi nke nwa ya nwoke, Jordan.
A hụrụ ọkachamara aka ya na ume nwa ya na ọnụego ọrụ ya. Jordan nwere nwa nwanne nwoke aha ya bụ Jody Henderson.
Ọnye na-bụ Rebecca Burnett? Nwunye Jordan Henderson:
Banyere ndụ onwe ya, Jordan anaghị a drinkụ mmanya, anwụrụ ọkụ ma ọ bụ ịchụ nwoke. Ọ hụrụ naanị otu nwanyị n'anya n'oge ndụ ya niile. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Rebecca Burnett mara mma.
Jordan Henderson na nwunye ya, Rebecca Burnett nwere nwa nwanyị mara mma aha ya bụ Elexa Henderson.
Brendan Rodgers Ozugbo Henderson na-arụ ọrụ mgbe nwunye ya mụsịrị nwa nke abụọ.
Ndị Reds guzoro-na skipper nọrọ n'abalị na-abịa ọmụmụ nke nwa ya nke abụọ Alba tupu ịlaghachi azụ duru ndị otu ya gaa mmeri na Wembley.
Echetara ya na ọ gwara dọkịta ụlọ ọgwụ…Ozugbo nwa ahụ pụtachara, m ga-alọghachi"...
Ndị dị nso na ezinụlọ ya maara na Jọdan nwere ndụ onwe ya zuru oke na Rebecca Burnett.
N'okpuru ebe a bụ Jordan Henderson yana nwunye ya Rebecca Burnett na-aga ịzụ ahịa na Manchester tupu 2017 Christmas.
Jordan Henderson na-akpọ nwunye ya maka ịzụ ahịa Krismas.
dị nnọọ ka Roberto Firmino na Philippe Coutinho, Ndụ ịhụnanya Jọdan na akụkọ ịhụnanya dị mfe ma kwụ ọtọ.
Jordan Henderson Biography - Ọ kwụsịrị pectkwanyere Giggs ùgwù:
Jọdan dị ka nwatakịrị kwuru na ya zutere Ryan Giggs na mmiri oké osimiri dị na Spain. N'okwu ya…
"Echetara m ya n'ụzọ doro anya mana abụ m nwata. Echeghị m na ọ ga-echeta ya ma ọlị. Echere m na Ryan Giggs bụụrụ m ihe nlereanya. See ga-ahụ ọtụtụ mmadụ na akwụkwọ akụkọ ahụ maka ebumnuche na-ezighi ezi mana na Giggs, ị nụtụbeghị banyere ya.
Jordan ama ọsọn̄ọde enye Giggs mgbe o kwusịrị akụkọ na-adịghị mma banyere akụkọ banyere Manchester United Legend nwere mmekọrịta ya na nwunye nwanne ya nwoke nke obere.
Kemgbe ahụ, ọ ghọrọ onye iro ọbụna na pitch.
Jordan Henderson Car Nhọrọ:
Jọdan na-arapara na Range Rover n'ihi Ike ya, Okomoko & Aha.
N'oge ahụ, Jọdan na-agba ụgbọ ala dị ala. Nke a bụ foto ochie nke ochie ochie Bebo, n'ebube ya niile.
Ahụhụ a na-enweghị ngwọta:
A gwara Jordan Henderson na ọ nweghị ọgwụgwọ ahụike maka mmerụ ahụ n'ikiri ụkwụ mere ka ọ ghara ịhapụ ọnwa atọ nke oge 2015 Liverpool.
A gwara ya na ọ ga-ebi na ihe mgbu n'oge ndụ ya niile.
Henderson kwuru na ihe mgbu;
“Ọ na-e incredibly ike, ọ bụghị naanị n'ihi na m ma ndị ọrụ nakwa. Ejiri m metatarsal m mara ụdị oge m ga-apụ.
Mana n'ikiri ụkwụ m enweghị akara ngosi oge, enweghị ọgwụgwọ ọ bụla. Nke ahụ bụ akụkụ kacha sie ike.
Ọ na-esi ike. Ekwetara m iburu ihe mgbu a ná ndụ m niile. ”
Jordan Henderson Biography - Ozugbo a boro ya ebubo na a na-akwụ ụgwọ karịa:
Damien Comolli, onye bụbu onye nduzi Liverpool nke football bụ onye kwetara ịkwụ ụgwọ £ 20m maka Henderson ozugbo kwupụtara na ya gosipụtara na redio mba na klọb ahụ ga-achụpụ ya, na-atụ egwu ịbanye na Henderson bụ mmejọ dị oke ọnụ.
Nke a mere mgbe Jordan Henderson gbalịsiri ike imeghari na mmalite Liverpool ya. N'oge ahụ, Rodgers bịara nso ire ya.
Onye na-eme egwuregwu na-amasị ya jụrụ ịkwaga Fulham - mgbe etinyechara ya na mgbanwe mgbanwe mgbanwe nke Clint Dempsey.
Henderson kama, gwuru ụkwụ ya wee sie ike na ọ gaghị ebe ọ bụla. Ọ bụ mkpebi nke gosipụtara n'ikpeazụ. Inwe ike ịlaghachi azụ site na ndọghachi azụ aghọwo ike ya kemgbe ọ bụ nwata.
Jordan Henderson Biography - Na-egwu egwuregwu ndị ọzọ:
Na football, Henderson rụkwara nke ọma na badminton na tennis table, ọ bụ ezie na egwu nwere ike ọ gaghị eme ọkwa dịka ndị na-agba ụkwụ n'ihi na ọ na-arịa ọrịa, Osgood-Schlatters.
Henderson na-egwuri egwu dị ka onye ọkpọ ọkpọ ọkpọ na-ele ya anya dị ka onye ọkpụkpọ na-arụsi ọrụ ike ma na-ewetara ndị otu ahụ ume.
A kọwara dịka "Onye na-eme egwuregwu n'egwuregwu ma na-arụsi ọrụ ike," Henderson amalitela egwuregwu ya mgbe ọ na-aga Liverpool na onye na-egwu ihe. Ozokwa, ọ na-ebugharị na-ebuli elu n'ọhịa mgbe ọ bụla mmegide ahụ nwere.
Jordan bụ onye mbụ 17 dị afọ ole na ole ka a ga - akpọ aha ya na ndị na - eme egwuregwu nke otu oge.
A kpọrọ ya aha 442 na 20 kacha elu n'okpuru ndị 21 n'ụwa na ndị mmadụ Messi, Fabregas, Aguero, Nani, Bojan, Benzema, Pato na Walcott. O doro anya na Jọdan bụ akụkọ akụkọ Liverpool.